Voices for voiceless: Abbaa Gadaa adoo hin ta’in maqaa abbaa gadaatiifi dhiiga uummataatiin daldaluun dhiiga nama dhaaba; dhiigni nama dhaabatelle gatii nama kafalchiisa.
Abbaa Gadaa adoo hin ta’in maqaa abbaa gadaatiifi dhiiga uummataatiin daldaluun dhiiga nama dhaaba; dhiigni nama dhaabatelle gatii nama kafalchiisa.
Dhiigni ni danfa; irraanille ni danbala’a. Dhiigni ni ajjeesa, ni du’alle. Dhiigni dhiigaaf dhiiga; dhiigni dhiigaaf lola’a. Dhiigni ni aara; dhiigni ni dhaabata. Dhiigni ni deema. Dhiigni ni iyya, dhiiga baasaa yookiin gumaa baasaalle ni yaama. Dhiigni yoo dallaneefi yoo danfe waan hedduu balleessa, akkasuma waan hedduu qulqulleessa. Woyyaaneen dabaan dhiiga Oromoota yeroo dhangalaastu, dhiigni Oromootaa gammoojjii cophi bishaanii hin jirre keessatti lola’uun qonna masinoo (jal’isii) ta’uun abdii bilisummaa lachisiiseera. Haa ta’uutii garuu, osoo abshaalummaafi qaroominni jiraate, laggeen akka Gannaalee, Daawwaa, Waabee Shabalee, Baaroo, Mormor, Dhidheessaafi kkf osoo jiranii, dhiiga namaa dhangala’aa jiruun sanyii midhaanii bilisummaaf facaasuun madaalawaa miti.
Dhiigni Oromoo ajjeechaa, hidhaa, dhaanicha, ukkaamsaa, loogii, haqa dhoowwachuufi….. Woyyaaneetiin dallanuufi danfuu woyta itti fufee jiru kanatti, gantoonni (kaadonni) Oromoo dhiiga isaanii ganan, Woyyaanee caalaa dhiigni Oromoo akka dallanuufi danfu taasisaneeran. Woraabessi yoo madaa’u madaa ofiisaa gara galee nyaataa akkuma jedhamu, gantoonni Oromoo, madaa Oromoo keessaa Oromoo nyaatanu, maqaa jaarsummaa biyyaatiifi maqaa abbaa gadummaa sobaatiin faayidaa dhiigaa, kan isaaniif hin malle argachuuf akka imiimii yookiin roobaan jireettiitti kosii itti dhokatan keessaa yaa’uu jalqabuu isaanii agarree jirra. Caasaa ijaarsaa mootummaa keessa kanneen jiraniifi dheebuu angoo harcaatuu jarreen qabanu, yeroodhaaf cinatti dhiisnee, yeroo wolgayii gara garaatiif gara qe’ee mootummaa harka dhiigaatti afeeramanee wamamanutti beesee yookiin maallaqa dhiigaa kanneen dhandhamaneefi mi’eeffatane, maqaa abbaa gadummaatiifi maqaa jaarsaa biyyummaatiin Woyyaanee woliin ta’uudhaan daba uummata irratti yoo hojjatan ragaa qabatamaa woliin Qeerroo Oromootiin qabamaneeran.
Gaafiin abbaa biyyummaatiifi falmii qe’eefi qabeennaa ofiitiif falmachuun dhiheenna kana guutuu Oromiyaa keessatti akka deemamaa tureefi ammalle deemamaa jirachuun akkuma beekamutti, Godina Gujii keessattille mormii karaa nageyaatiin taasifameen lubbuun namoota nageyaa hedduun mootummaa harka dhiigaatiin galaafatameera. Sheek Mohaammad Huseen Allamuddiifi Woyyaanonni, woggootaan 17 oliif, halkaniifi guyyaa, guyyaa hujiitiifi ayyaanaa adoo hin jedhin, nannoo Shaakkisoo Laga Dambiifi Saakarroo qofa keessaa wogga tokkotti worqii toonii 4.5 yookiin kuntaala 45 woggaa tokko tokkotti akka oomishanii saamaa jiranu ragaan toora interneetii isaaniirraa argame ni mul’isa. Akka malee duroommachuun Allaamuddiniifi Woyyaanotaa keessaa tokko kan ta’e saamama worqii Gujiiti. Saamicha Worqii woggoota 17f Laga Dambiitiifi Saakarrootiin kan hin quufin woyyaanonniifi Allaamuddin, lafa worqii ta biraa irraa uummata kaasuuf karooraan gadi bahuun isaanii, mormii guutuu Oromiyaatti finiinaa jiruun walqabatee, uummata naannoo akka malee dallansiisee mormisiiseera.
Mormii uummataa kanaan walqabatee, haala nama gaddisiisuufi nama baasonfachiisuun, abbaa gadaa osoo hin ta’in, abbaa gadaa kan if taasise obboo Bokkoo Gannaalee kan jedhamuufi fakkaattonni isaanii, “Waldaa Abbootii Gadaa Oromoo Gujii” jedhuufi kan uummaanni hin beekni magaalaa Finfinneetti hundeessuun isaanii bira gahameera. Kun kanaan osoo jiru, akka aadaatiifi sirnyaan kan filataman abbaan Gadaa Gujii, Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo osoo jiruu, namni abbaa gadaa ifiin jedhu kuniifi fakkaattonni isaa qorii dhiigaa keessaa nyaachuu kan baratan, maqaa abbummaa gadaa Gujiitiin chaappaa boccisiifatanii maallaqa miliyoona shan kubbaaniyyaa worqii midirookii yookiin Woyyaanee gaafachuu isaanii, xalayuma isaan gaafa 15. 07. 2008. A.L.I.tti barreessanirraa hubachuun danda’ameera. Daldaltoonni dhiigaa kunneen, kan uummata keessa bahaniifi uummata jalaa miliquufi bahuu akka hin dandeenne beekanii, qarshii duubarra isaan nyaattu nyaachuurraa akka if qusatanuufi gara uummataa isaaniitti akka deebi’aniif balballi akka malee dhiphoon isaaniif hafuunsaa barameera.
Posted by Daniel Areri at 9:35 AM
ወያኔ የኦሮሞን ሕዝብና ሌሎች ኢትዮጰዉያኖችን ለመግደል ጥይት ሳያንሰው መድሃንት...
አባ ገዳ ሳይሆኑ በአባ ገዳ ስምና በሕዝብ ደም መነገድ ደምን ያፈላል፣የፈላ ደም...
Abbaa Gadaa adoo hin ta’in maqaa abbaa gadaatiifi ...